Home » Wararka » Wasaaradda A. Gudaha oo war kasoo saartay Wada hadalada Ahlusuna iyo Galmudug
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta ayaa goor dhow war murtiyeed ka kooban 9 qodob ka soo saartay wada hadaladii u dhaxeeyay Galmudug iyo Ahlusuna ee uga socday magaalada Muqdisho.
War murtiyeedka oo uu ku saxiixnaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Faarax Juxa ayaa lagu sheegay in labada dhinac Galmudug iyo Ahlusuna ay heshiis ka gaaraan khilaafkooda, islana qaadaan wax qeybsi siyaasadeed oo ku dhisan cadaalad iyo is tixgelin.
Sidoo kale waxaa qodobada war murtiyeedka ka mid ahaa in Galmudug ay qabsato doorashada Madaxweynaha xilligii lagu balamay oo ku beegan 30-ka bishan,.
Waxaa kaloo war murtiyeedka lagu sheegay in marka la doorto Madaxweynaha Galmudug in la isugu yimaado dhameystirka wada hadalka iyo dhaqan gelinta heshiis siyaasadeed oo dhex mara labada dhinac iyo awood qeybsi buuxa laga dhigo wada hadalka kaddib.
Inkastoo qodobada aanay ku qeexneyn qodobo cad cad ah oo labada dhinac ku heshiiyeen, hadana waxaa uu war murtiyeedkan u eg yahay qaab xal mastuur ah, iyadoo wada hadaladii labada dhinac ahaayeen kuwo lagu kala tagay.
Madaxii Galmudug u qaabilsanaa wada hadalada Ahlusuna Cusmaan Dheere oo maanta shir jaraa;id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay istaageen wada hadalada, isla markaana dhanka Ahlusuna ay wax ka socon la’yihiin, dowladda Federaalkana u fasaxday inay doorashadadooda ku dhaqaaqaan.
Dowladda Federaalka ayaa ku fashilantay isku daygii u horeeyay ee siyaasadeed oo ay ku heshiisiin laheyd maamulo is diidan, iyadoo ay xusid mudan tahay in Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ay labadaba ka soo jeedaan Galmudug.
EU oo walaac ka muujiyay xukuno dil ah oo maxkamada ciidamada ay fulisay